ရူးဘ်ဂိုးလ်ဘာ့ဂ်စက် - ဝီကီပီးဒီးယား
ရူးဘ်ဂိုးလ်ဘာ့ဂ်စက် (အင်္ဂလိပ်: Rube Goldberg machine) စကားလုံးသည် ရူးဘ် ဂိုးလ်ဘာ့ဂ် ဆိုသည့် အမေရိကန်ကာတွန်းဆရာကို အစွဲပြု၍ အမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်တုံ့ပြန်ခြင်းရှိသော စက်၊ ထွေလာဆန်းပြားစွာ ပုံစံထွင်ထားသော စက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ကာ ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းတစ်ခုကို သွယ်ဝိုက်သောနည်း၊ အလွန်တရာရှုပ်ထွေးသောနည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်သာဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် ဤစက်မျိုး၌ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်စပ်မှုမရှိသော ရိုးရှင်းသည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို သုံးထား၏ ။ တစ်ခု၏ ဆောင်ရွက်မှုသည် နောက်တစ်ခု၏ လုပ်ငန်းအစကို ဖြစ်စေကာ နောက်ဆုံး၌ လိုချင်သည့်၊ ရည်ရွယ်သည့် ပန်းတိုင်/ရည်မှန်းချက်ကို ရရှိစေရန်ဖြစ်လေသည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် ဤသို့သော ကြံဖန်တီထွင်ထားသည့် စက်ကို "ဟိသ် ရောဘင်ဆန် ထွေလာဆန်းပြားစက်" (Heath Robinson contraption) ဟု ကာတွန်းဆရာ ဒဘလျူ ဟိသ် ရောဘင်ဆန်ကို အစွဲပြု၍ပင် အမည်ပေးထားကြလေသည်။
ဤစက်၏ ပုံစံကို ပုံမှန်အားဖြင့် စာရွက်ပေါ်၌သာ ရေးဆွဲတင်ပြလေ့ရှိကြပြီး လက်တွေ့ဖော်ဆောင်ရန်မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိပေ။ များမကြာသေးမီက ဤသို့သော စက်များကို ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုအတွက် တည်ဆောက်နေခဲ့ကြသည်။
"ပရောဖက်ဆာ ဘာ့တ်နှင့် အလိုအလျောက် လက်သုတ်ပဝါ" ။ ဇွန်း (A) ကို ပါးစပ်ဆီသို့ မြှောက်လိုက်ရာ ကြိုး (B) ကို ဆွဲမိ၏ ။ ထို့ကြောင့် ယောက်ချိုဇွန်း (C) ကို ဆတ်ခနဲ ဖြစ်စေလိုက်သဖြင့် မုန့်ချပ် (D) သည် အပေါ်သို့ မြောက်သွားကာ ကော့ယင်ငှက် (E) ကို ဖြတ်သွားလေသည်။ ငှက်က မုန့်နောက်သို့ လိုက်၍ ခုန်သည်။ ထိုအခါ ငှက်နားရာနေရာ (F) သည် တိမ်းစောင်း၍ အစေ့များ (G) ကို ခွက် (H) အတွင်းသို့ ကျစေရာ ခွက်မှာ အလေးချိန်ကြောင့် ကြိုး (I) ကို ဆွဲလိုက်သည်။ ထိုအခါ မီးခြစ် (J) ကို မီးတောက်စေ၍ ရှူးဒိုင်း (K) ကို ထွက်သွားစေသောအခါ ရှူးဒိုင်းဖင်တွင် တပ်ထားသည့် တံစဉ်သည် ကြိုး (M) ကို ဖြတ်ပစ်လိုက်၍ ချိန်သီးနာရီနှင့် တွဲစပ်ချည်ထားသော လက်သုတ်ပဝါသည် ရှေ့နောက် လွှဲယမ်း၍ ပရောဖက်ဆာ၏ မေးစေ့ကို အလိုအလျောက်သုတ်ပေးသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာကာလအတွင်း ဤအသုံးအနှုန်းသည် ကျယ်ပြန့်လာ၍ အလွန်တရာရှုပ်ထွေးသောစနစ် ဟူ၍ အနက်ထွက်လာသည်။ ဥပမာ သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းတွင် "Is Rep. Bill Thomas the Rube Goldberg of Legislative Reform?" (လွှတ်တော်အမတ်ကြီး ဘီလ် တောမတ်စ်သည် ဥပဒေပြုပြင်ရေး၏ ရူးဘ်ဂိုးလ်ဘာ့ဂ်စက် ပေလော။) ဟူ၍ ရေးသားမှုမျိုးရှိသကဲ့သို့ "Retirement 'insurance' asaRube Goldberg machine" (အငြိမ်းစား အာမခံ(မူဝါဒ)သည် ရူးဘ်ဂိုးလ်ဘာ့ဂ်စက်) စသဖြင့်လည်း ရေးသားကြသည်။
↑ Economist's View: Is Rep. Bill Thomas the Rube Goldberg of Legislative Reform? Archived 2006-05-06 at the Wayback Machine.. Economistsview.typepad.com (2005-06-06). Retrieved on 2011-05-06.
↑ Social Security's Progressive Paradox – Reason Magazine Archived 2009-09-03 at the Wayback Machine.. Reason.com (2005-05-02). Retrieved on 2011-05-06.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရူးဘ်ဂိုးလ်ဘာ့ဂ်စက်&oldid=668038" မှ ရယူရန်
စက်ယန္တရားများ (အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်)
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၁၇:၃၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။